Samaynta Xukunka Jarmalka
Saaxiibbo waad salaaman tihiin, boggayaga Samaynta jumlado af Jarmal ah Waxaa jira maqaallo badan oo la xiriira mowduuca. Qaar badan oo ka mid ah asxaabteena ayaa raba inaan casharradeena ku dhigno sameynta jumladaha si Jarmal ah.
Codsigaaga, waxaan ku taxnay casharrada aan diyaarinay ee ku saabsan sameynta jumladaha af Jarmal, laga bilaabo eber illaa heer sare, sida soo socota. Casharradayada Jarmalka ah mid mid ayaad u aqrin kartaa, adiga oo ka bilaabaya casharka koowaad.
Xagga sare Samaynta jumlado af Jarmal ah Casharrada waad u aqrin kartaa si isku xigxiga. Waxaan rajeyneynaa inaad si weyn uga faa'iideysan doontid mowduucyadeena lagu sharraxay afka Turkiga isbarbardhig.